Iwo gumi akanakisa ekuvanzika mari uye maitiro ekuatenga - Cazoo
musha » musha » Iwo gumi akanakisa ekuvanzika mari uye maitiro ekuatenga
Tag: Binance, Monero, Oasis Network, Phala Network, zvakavanzika mari, Secret, Zcash
Le zvakavanzika mari macryptocurrencies anogona kuvanza kana kukanganisa kutengeserana pa blockchain kuchengetedza mazinga epamusoro ekuvanzika uye kusazivikanwa.
Nzira yavo yepamberi yecryptographic ndiyo inosiyanisa mari yekuvanzika kubva kune mamwe makriptoaktiti akadai seBitcoin nedzimwe mari dzeAlt. Zvine musoro here kuve nekuvanzika kwakazara uye kusazivikanwa kwakazara mucrypto transactions? Kana zvine musoro, apa ndipo panopinda "mari yekuvanzika".
Yenguva dzose cryptocurrencies haisi yega yega, sezvo kutengeserana kuri kwese pa blockchain, ledger yeruzhinji, uye yakavhurika kune chero munhu. Kunyange sisitimu yakadai ichipa mabhenefiti akati wandei, haipe vashandisi kuvanzika kwakazara uye kusazivikanwa, zvichiita kuti zvive nyore kubatanidza chitupa kune kero yemumwe munhu.
Mari yekuvanzika haina kunyanya kusiyana ne bitcoin kana mamwe maaltcoins. Vanoviga kero dzechikwama uye mashoko asina kujeka anogona kushandiswa kuziva muridzi wechikwama.
Muchikamu chino, tichatora zvakadzama kuti ndezvipi mari yekuvanzika, mashandisiro avanoita, uye kuti ungaawedzera sei muchikwama chako neBinance.
Chii chinonzi privacy coins?
Ndedzipi nzira dzecryptographic dzinoshandiswa nemari yekuvanzika?
Idzo mari dzepachivande hadzigoni kurondwa here?
Mari yakanakisa yekuvanzika paBinance
Mari yekuvanzika ikirasi yemakristptocurrencies yakavakirwa pamisimboti miviri mikuru: kusazivikanwa uye kusatarisika.
Ko mari dzekuvanzika dzinoshanda sei?
Kufanana nemamwe macryptocurrencies, mari dzekuvanzika dzinoshandisawo blockchain tekinoroji sedhijitari yakagoverwa. Nepo kutengeserana neakasiyana cryptocurrencies kazhinji kuri kweruzhinji, mari yekuvanzika inogadzirwa nenzira inoita kuti zviome kwazvo (kana zvisingaite) kubatanidza kutengeserana. Hazvibviri kuziva kwakabva mari yacho kana kuti kwainoenda.
Chii chinosiyanisa mari yekuvanzika kubva kune yakajairwa cryptocurrencies ndeyekuti vanoshandisa cryptography kuvanza chikwama chemushandisi uye kero kuchengetedza kusazivikanwa uye kusateedzera.
Ini ndinoedza kudonongodza nzira ina dzecryptographic dzinoshandiswa nedzimwe mari dzepachivande kuchengetedza ruzivo rwakavanzika.
Stealth kero (Stealth kero): Kutengeserana kwega kwega kunogadzira kero nyowani kuchengetedza kuvanzika kwemugamuchiri. Izvi zvinovimbisa kuti mapato ekunze haakwanise kubatanidza chero kubhadhara kune kero yako yechikwama.
CoinJoin: Inoshanda semusanganisi wekoini inobatanidza kutengeserana kwevanhu vakati wandei kuita chinhu chimwe chete. Zvadaro, mumwe wechitatu anotsemura nhamba chaiyo yemari uye anotumira kune vanogamuchira. Mumwe nemumwe anogamuchira anogashira mari pakero nyowani kuderedza kurongeka.
Zk-SNARKs: Zk-SNARKs, acronym ye zero-zivo pfupiso isingabatanidzi nharo yeruzivo, inokubvumira kuratidza kuti kutengeserana kunoshanda pasina kugovera ruzivo rwayo (mutumi, mugamuchiri, huwandu).
Mhete masiginicha: Paunosaina kutengeserana nekiyi yakavanzika, vamwe vanogona kubatanidza siginecha yako kukero yako. Siginecha yemhete inodzivirira izvi kuti zvisaitike.
Sezvo paine masiginecha akati wandei mukutengeserana kumwe chete, zvinova zvakanyanya kuomera vamwe kubatanidza siginecha yako kukero yako.
Izvi zvinoenderana nemagadzirirwo uye magadzirirwo ega ega mari yekuvanzika, sezvo mamwe achiteedzera kupfuura mamwe ... uye haasi ese ari ega sezvavanotaura. Maprotocol akasagadzirwa zvakanaka anogona kunge aine zvikanganiso zvinogona kuita kuti matransport avo aonekwe. Nekudaro, tichifunga nezve yazvino encryption uye encryption nzira, zvakavanzika mari inoshanda nemazvo. Gara wakangwarira: Nekugadzirwa kwezvishandiso zvitsva zvekuongorora, makomputa rimwe zuva anogona kuzove nesimba rakakwana rekutsemura nzira dzemazuva ano dzekunyorera.
Mari yekuvanzika yakanakira avo vari kutsvaga kuvanzika kwechokwadi kwemari. Pazasi ini ndakanyora akanakisa ekuvanzika mari yaunogona kufunga kuwedzera kune yako cryptocurrency wallet (* mitengo uye musika caps kubva muna Kubvumbi 2022):
Monero (XMR) pamutengo we $ 217,50 uye musika wemari we $ 3.936,97M.
Oasis Network (ROSE), pamutengo we $ 0,27 uye nemusika cap ye $ 927,01M *.
Decred (DCR), pamutengo we $ 62.50 uye musika cap we $ 868.52M *.
Secret (SCRT), pamutengo we $ 5.37 uye musika cap we $ 876.89M
Horizen (ZEN), pamutengo we $ 48.18 uye musika cap we $ 589.19M *.
Verge (XVG), pamutengo we $ 0,013 uye musika wemari we $ 218,47M *.
Dusk Network (DUSK), pamutengo we $ 0.50 uye musika wemari we $ 201.48M *.
Phala Network (PHA), pamutengo we $ 0.29 uye musika wemari we $ 79.20M *.
danda (BEAM), pamutengo wemadhora 0.38 uye musika wemari we $ 42.54M *.
Sezvo Bitcoin uye mamwe akawanda makriptoakti achimhanya pane yakasarudzika network, anogona kupa imwe nhanho yekuvanzika. Semuenzaniso, kubvumira vashandisi kugadzira wallet pasina kuburitsa pachena mazita avo. Nekudaro, hazvisi zvepachivande zvachose nekuti kutengeserana kwakanyorwa pa blockchain. Saka nekudaro, mari yekuvanzika inogona kuve sarudzo kune avo vari kutsvaga mazinga epamusoro ekusazivikanwa uye kuvanzika.
Izvo zvakati, rangarira kuDYOR usati watenga uye nekuzvipira kune chero mari yekuvanzika.
Nyaya yapfuuraBhora kupa: chinja fiat & share. Pool Prize: 50.000 BUSD neBinance
Nyaya inoteveraIwo metrics ekufunga nezvekutenga nekutengesa maNFTs